Ileyisi yinto eqhelekileyo yokufikelela kweleyisi. Ngokubanzi kubonakala ngeempahla, iimpahla zangaphantsi, amalaphu asekhaya. Ileyisi ibhityile kwaye yahluziwe. Iimpahla zangaphantsi zasehlotyeni zihlala zinomxholo wentambo. Umtya kwimpahla unokudala imvakalelo emnandi. Intambo ekwilaphu lasekhaya yongeza imvakalelo engalindelekanga ekhaya. Amalaphu asekhaya aneleyisi ayongezwa, awongeza umbono wolawulo kwilaphu lasekhaya. Ke singahlula njani umgangatho xa uthenga iimveliso zeleyisi?
Ukuvela kokuqala. Umgangatho womgangatho wokulala wesilika, onemigca ecacileyo, ushicilelo olupheleleyo, kunye nelaphu elilungileyo, ngaphandle kokuziva kwemigca engacacanga kunye noshicilelo olurhabaxa. Abathengi bacetyiswa ukuba bakhethe iimveliso ezinemibala eqaqambileyo okanye imibala yendalo, kuba akukho lula ukuphela. Kwaye ezinye iimveliso ezinemibala eqinileyo zinokuphela ngokulula ngenxa yedayi enzima. Ukongeza, kukho uvavanyo olulula: beka isiziba selaphu elimhlophe kwimveliso kwaye uyihlikihle ngapha nangapha. Ukuba ufumanisa naziphi na iimpawu zokubala kwilaphu elimhlophe, liza kuphela.
Okwesibini kunuka. Ivumba leemveliso ezisemgangathweni ngokubanzi zihlala zintsha kwaye zendalo ngaphandle kwevumba elikhethekileyo. Ukuba uvula iphakheji kwaye unuka ivumba elitsarhayo elifana nevumba elimuncu, mhlawumbi kungenxa yokuba i-formaldehyde okanye i-asidi kwimveliso ingaphezulu komgangatho, ke kungcono ukuba ungayithengi. Okwangoku, umgangatho onyanzelekileyo wexabiso le-pH lempahla ngokubanzi yi-4.0-7.5. Ekugqibeleni uthinte ukuthungwa.
Okokugqibela kukusila isandla. Imveliso elungileyo iziva intofontofo kwaye intekenteke, ngoxinano, kwaye ayiziva irhabaxa okanye ikhululekile ekuphathweni. Xa kuvavanywa iimveliso ezicocekileyo zomqhaphu, zinokutsalwa iifilamenti ezimbalwa ukuze zitshise, kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba zikhuphe iphepha elitshayo xa litshisa. Ungalujika nothuthu ngezandla zakho. Ukuba akukho ziqhuma, oko kuthetha ukuba yimveliso yomqhaphu emsulwa. Ukuba kukho amaqhuma, oko kuthetha ukuba iqulathe ifayibha yemichiza.